म कसरी बनाउँछु मेरो वेबसाइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू पछ्याउनुहोस्?
यो बिना कि राम्रो तरिकाले गठन गरिएको ब्याकलिङ्क प्रोफाईल बिना, यो वेब साइट राम्रो तरिकाले Google मा रैंक गर्न असंभव छ, वा कम से कम शीर्ष दस खोज नतिजाहरु बीच भेट्टाउन सकिन्छ. दुर्व्यवहार, हेरफेर वा यसको रैंकिंग एल्गोरिदम संग कुनै पनि सम्भाव्य चालहरू रोक्न, विश्वको खोज विशाल यो धेरै वर्षहरु मा विकसित भएको छ।. यस तरिका, गुगल अब केवल प्राकृतिक, शुद्ध रूपमा प्रासंगिक र अत्यधिक प्राधिकृत ब्याकलिङ्कहरू इनाम दिने जाँदैछ. र तल म तपाईंलाई देखाउने केहि स्मार्ट तरिकाहरू देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईंको वेबसाइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू पछ्याउनुहोस् - monitoring money. तर अरू कुनै पनि भन्दा अघि, मलाई सरल परिभाषाहरूको साथ सुरु गर्न दिनुहोस्.
भन्नु पर्दैन कि लिङ्कहरू इन्टरनेटको सबै थोप्लाहरू एकै ठाउँमा छन् - सबैलाई थाहा छ कि. तर ती सबैले बराबर वजन असर गर्दैनन्. वास्तवमा, दुई प्रकारको लिङ्कहरू छन् - गैर पछ्याउनुहोस् र पछि लिंकहरू पछ्याउनुहोस्. सादा अंग्रेजीमा राख्नु, गैर अनुगमनको लिङ्कहरू मुख्य खोजी इन्जिनको दृष्टिकोणबाट लगभग निलो र शून्य हो. तिनीहरू सिधा यातायात ल्याउन डिजाइन गरिएका छन्. अर्कोतर्फ, तथापि, पछि लिंकहरू पछ्याउनुहोस् विशेष निर्देशिकाहरू, लेखहरू, र ल्यान्डिङ पृष्ठहरू प्रयोग गर्दैछन् एक वेबसाइटको प्राधिकरणलाई स्थानान्तरण गर्न अर्कोमा.
जाहिर छ, पछि पछ्याउनुहोस् लिंकलिङ्कहरू धेरै कठिन हुन्छन्, र प्रायः सामान्यतया तिनीहरू इमेजमा छन् जुन एक कुशल वेबमास्टरद्वारा सम्मिलित हुनुपर्छ।. र यहाँ हामी अन्तमा बिन्दुमा आउँदैछौं - निम्न स्मार्टफोनहरू हो (उच्च वा कहिलेकाँही होइन) उच्च-गुणस्तर बनाउनका लागि गुगलमा तपाईंको वेबसाइटको उच्च श्रेणीको लागि ब्याकलिङ्कहरू पछ्याउनुहोस्:
गुगल प्लस एक पूर्वनिर्धारित सामाजिक प्लेटफर्म जुन सही प्रयोग भएको बेलामा आश्चर्यजनक शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ. तपाइँलाई त्यहाँ चाहिन्छ वा तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत प्रोफाईल वा नयाँ खाताको लागि साइन अप छ. अर्को, "बारेमा" सेक्सनमा जानुहोस् र यसको पाठ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्, साथसाथै तपाइँको वेबसाइटमा दिइएको प्राथमिक लिंक. थप रूपमा थप्न महसुस गर्नुहोस् तपाईलाई आवश्यक रूपमा ब्याकलिंकहरू पछ्याउनुहोस्, तर त्यसो साथ नबनाउनुहोस्. अन्यथा, तपाईंको प्रयास पनि Google द्वारा स्प्याम वा हेरफेरको रूपमा चिन्न सकिन्छ.
ओनिमेसन एक पुरानो पुरानो वेबसाइट हो जसले मलाई हाल हालैका वर्षहरूको लागि ब्याकलिंकहरू पछ्याउन मद्दत गर्दछ. एक विशेष सम्पादक रोल प्राप्त गर्न केवल रजस्टर गर्नुहोस्, र सम्पूर्ण वेबसाइटमा पहुँच गर्न निःशुल्क महसुस गर्नुहोस् र तपाईंलाई चाहिने कोटी छनौट गर्नुहोस्.
Dmoz पनि एक पुरानो साइट हो, जो मुख्य रूपले लिङ्क निर्माण प्रयोजनका लागी ब्लग पेश्कीहरूसँग सम्झौता गर्दछ. तपाईलाई Dmoz मा आवश्यक छ तपाईको वेबसाइट वा ब्लगको मुख्य विषयको सट्टा सही श्रेणी छनौट गर्न हो. यसको अनन्य विशेषताहरूमध्ये, म यो स्रोत प्रयोग गर्न सिफारिस गर्नको लागि तपाईंको नजिकका प्रतिद्वंद्वहरू द्वारा बनाईएको उत्तम ब्याकलिङ्कहरू तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नका लागि सिफारिस गर्दछु।.
केहि अतिरिक्त प्राप्त गर्न को लागी एक महान ठाँउ हो Backlinks को पालन गर्नुहोस - सिर्फ टिप्पणी देखि. केवल एक नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस् र "गर्म टिप्पणी" सेक्शनको साथ अगाडि बढ्नुहोस्. त्यस तरिकाले, तपाइँ प्रति खातामा अधिकतम दुई उच्च गुणस्तरको ब्याकलिङ्कको आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ.
सबै पछि, तपाईं ट्रेल्स मा एक तिर्खा तिर्न सक्नुहुन्छ. सह र आफ्नो रैंकिंग को रूप मा तपाईं चाहते हो को बढावा दिन को रूप मा धेरै backlinks छान्नुहोस्. साथै, त्यो तपाईंलाई एक डलर खर्च हुनेछ - सेवा नि: शुल्क छ. यसो गर्दा, एक पटक फेरि यो नोट गर्नुहोस् - तपाईंको ब्याकलिङ्क काउन्टर र उनीहरूको छिटो सिर्जनाको साथ ओभरराइड नगर्नुहोस्. अन्यथा, तपाईले अनावश्यक रैंकिंग दण्डको लागि रातो झण्डालाई फोन पुर्याउनुहुनेछ.